Tacsi: Sheekh Caan ka Ahaa Waqooyi Bari Kenya [NFD], oo ku Geeriyooday Magaalada Nairobi – Rasaasa News
Feb 14, 2011 oo ku Geeriyooday Magaalada Nairobi, Sheekh Caan ka Ahaa Waqooyi Bari Kenya [NFD]
Allaha u naxariistee waxaa shalay oo bisha Feb ahayd 13 ku geeriyooday magaalada Nairobi Sheekh Cabdiraxmaan Cismaan Xirsi (Feedhayare) oo la sheegay inuu mudo bil ah ku xanuunsanaa halkaas. Sheekha oo si aada looga yaqaano guud ahaan gobalka waqooyi bari Kenya, gaar ahaana dagaanka Wajir, ayaa lagu tiriyaa inuu ka mid ahaa aabayaasha dacwada salifiga ah ee ka hana qaaday gayiga soomaalida kenya, gaar ahaan magaalada Wajir iyo nawaaxigeeda.
Marxuuka ayaa mudo dheer kusoo jiray fidinta diinta islaamka, isagoo in badan oo waqitiiisa ah ahaa hormuudka madarasooyin kala duwan oo ku yaala dagaanka Wajir, gaar ahaan magaalada Wajir iyo Leheley, halkaasoo ay ka aflaxeen arday aad u badan oo qaarkood hada yahiin ducaad si wayn looga yaqaano deegaanka, iyadoo ay intaas u dheerayd inuu ahaa daaci ma daala ah oo muxaadarooyin iyo wacdi ka jeediya masaajida, isagoo inta badan xooga saari jiray arimaha Towxiidka.
Dad aqoon fiican u lahaa Sheekha waxa ay sheegeen inuu ahaa nin aad u firfircooon, isla markaana aan sheegida xaqa cidna uga gaban, iyadoo dhibaatooyin badan kasoo gaareen arintaas. Allaha u naxariistee intii aanu geeriyoon waxaa uu Sheekh Cabdiraxmaan mudiir ka ahaa madarasada Saleetey oo ku taala Wajir.
Ilaahay waxaanu waydiisan in uu marxuumka Janatul-Firdows ku manaysto, eheladii, qaraabadii, macalimiinta iyo ardayda madarasada Saleetey iyo dhamaan inta sheekha taqaanaybana samir iyo iimaan ka siiyo.
Geeri Naxdin Leh: Innaa Lillaahi Wa Inaa Illaahi Raajicuun